Ninka jooga Xamarow Xaabaashaada sii qodo.
Calan kaaga Xiddigta leh Xagalsha na ku sii qaad.
Ducale Wanaje II
Political anylist/MA Social Scinece/Community Orgenizer.
Dhimashadu xaq weeyaan. Xabaal ayaa qof walba sugaysa. Qof waliba wixii uu sii dhigtay ayuu dhaxalkeeda helayaa - waa na in la is xasuusiyo in ay tahay lama huraan in dhammaan loo wada hulleelahayo aakhiro. Ilaahay ha laga cabso ! Waxa aan Ilaahay inooga baryahayaa in uu ina waafajiyo wixii uu khayrku inoogu jiro ifka iyo aakhirada ba muslim ahaan.
Cinwaanka maqaalkayga ee dhiilada leh waxa aan u doortay wararka la hubo ee sheegahaya in Col. C/Yussuf iyo xulafadiisa xabashidu ay aruursan hayaan ciidamo fara badan oo u dhashay qaar ka tirsan Daaroodka Kilnka ( zone ) shanaad, Oromo iyo Tegray isgu jira oo lagu wado in la soo dejiyo magaalada Baydhaba si ay jidka ugu banneeyaan sidii ay dawladda Col. C/Yusuusf (FKGS) ay u gaari lahayd Moqdisho bilaha soo socda.
Ciidanka C/Yussuf iyo Caasimadda Cusub.
Lama diidana, mana xuma in ay dawladdi soo gaarto ama ay timado caasimada Moqdisho oo waa wax loo baahan yahay sidii ay dawladdi Somalia uga hirgeli lahayd halkaas, laakiin se ra'yigayga ilama qurux badna mana haboona farsamada habka loo adeegsaday sidii ay dawladdu ku gaari lahayd ama ay ku imaan lahayd Moqdisho. Ma na aha qorshe hor-u-kac leh oo loo qaaday dhinaca nabadda iyo xasiloonada mana aha mid ay dani ugu jirto Somalida gebi ahaan ba.
Ciidan ka kooban ugu yaraan 12,000 oo askari inta laga war qabo ayaa la bilaabay in la abaabulo bishii hore gudaheeda - November 2004, si ku salaysan xaalad deg-deg ah oo qarsoodi ku dhisan (Crash Programme ). Waxa loogu talo galay ayaa la leeyahay in hubka lagaga dhigo dhammaan waxii hubaysan laga soo bilaabo xuduudka Kenya-Somalia iyo Ethiopia-Somalia ilaa koonfurta magaalada Gaalkacayo. Qiyaastii waa degaanka dhul Hawiye iyo degaanka dhul Mareexaan. Cidamada la qortay waxa ay ka kooban yihiin laba qabiil oo kala ah qayb ka tirsan qabiilka Ogaadeen iyo qayb ka tirsan qabiilka Majeerteen ee reer Hawdka. Waxa weheliya ciidamo ku gaashaaman taangiyo, tikniko iyo hubka culus oo ka tirsan xoogga dalka Itoobiya oo u badan tegranya. Waxa lagu aruurinahayaa meelo ay ka mid yihiin magaalooyinka Goday, Shilaabo, Wardheer iyo meelo kale oo aan weli la ogayn.
Qorshaha noocaas ah waa mid ay iska caddahay ujeedada laga leeyahay. Lagu ma qanacsana in ay ciidamadaasu ku gaari doonaan Caasimada Moqdisho si gelbis ah oo dagaal la'aan ah marka la eego qaabka loo soo agaasimay ee qabiilka iyo cunsuriyadda ku dhisan.
Nin rag ahi waa garan karaa�
Nin rag ahi waa garan hayaa, nacasna loo sheegi mahayo in ku-talo-galka dhabta ah ee laga leeyahay ciidankaasu uu yahay aargoosi iyo xasuuq beelaha Hawiye iyo xulafadooda.
Sidii laga sheegay Sayid Maxamed Cabdallaha Xassan waxa la mid ah siyaasadda iyo qorshaha C/Yussuf in haddii uu ku guulaysan kari waayo in ay dawladdiisu ka degto Moqdisho uu ugu danbaynta rabo in uu dhaawac weyn kaga tago dadka inta uu ciilka u qabo.
" Haddii aan waayay calan la ii nashiro tan iyo Nairobi, ma waxa aan waayay wax aan naafeeyo iyo nolol qurmuunaata. Ina C/lla Xassan 1915.
Qorshaha hub-ka-dhigista Somalia.
Qorshaha hub-ka-dhigista Somalia oo sidiisa ba ah fikrad u gaar ah Col.C/Yussuf oo uu ku tillaabsaday isaga oo aan ogolaansho ka helin baarlamaanka cidina aanay u ansixin qaabka iyo farsamada ay tahay in loo adeegsado ayaa u muuqata tilaabo ah suuq madaw oo aan xalaal ku dhisnayn. Waa tilaabo aan waxba ka tarahayn nabadgelyada iyo nabadaynta Somalia iyo dib-u-dhiska dalalka burburay.
Marka uu C/Yussuf dhinaciisa ka soo dhiso ciidamo Daarood oo sooc ah ka dib na uu ku soo qaado duulaan magaalada Moqdisho inuu xoog ku qabsado wada tashi la'aan waxa ay ka dhigi karta dhinaca kale ee Hawiye in aanay gacmaha laaban oo aany ahayn wax dhici kara in la iska daawado inta ay ciidamadaasu soo gelahayaan Xamar. Ciidamada ay C/Yussuf iyo MelesZenawe ku soo hogaaminayaan Xamar waa khiyaamo iyo shirqool loo dhigahayo Somalida guud ahaan iyo gaar ahaan qabiil weynaha Hawiye iyo xulafadiisa. Ciidamada taladooda iyo amarkooda waxa iska leh MelesZenawe Madaxweynaha Itoobiya iyo xulafadiisa isticmaarka cusub oo hadaba marmarsiinyo ka dhigan haya argagixiso ayaa joogta Xamar oo been ah.
Xamar waxa jooga nin nool oo Ilaahiisa yaqaan oo shantiisa waqti tukada oo dhibane ah ay haleeleen ( victim ) shirqoolada iyo mu'aamaradaha xeeladaha cusub ee sahyuuniyadda caalamiga ah oo ku jira wax-iska-caabin, jecel in uu sii ahaado nin dhinta isaga oo xor ah oo muslim ah.
Qorshaha C/Yussuf iyo xulafadiisa Xabashidu waxa uu sababi karaa iska hor-imaad ciidan oo qabiil ku salaysan mid aan hore loo arag noociisa oo ka burbur iyo khasaaro badan marka loo eego waxii hore u soo dhacay. Madaxweyne dadka iyo dalka dan ka leh kama dhalan karto fikradda in uu dalkiisa ku soo hugaamiyo ciidamo gumaysi oo shisheeye ah haddii aanu qabin cuqdad iyo ciil uu rabo in uu ku aar-goosto isaga oo uga faa'iidaysanahaya fursadda uu helay ee Madaxweyne ama aanu ahayn cammiil aany gacanta waxba ugu jirin.
"Haddii aanay xeeladi ku jirin maxaa sacabka habeenkii loo garaacaa"!
"Haddii aanay xeeladi ku jirin maxaa ciidanka qaran looga bilaabi waayay Xamar"!
Horta adigu iska dhig hubka waa hadal aan meesha qaban�
Madaxweyne C/Yussuf waxa uu weydiistay hub iyo ciidan beesha caalamka. Waxa lagu qanciyay in aan loo baahnayn hub iyo ciidan danbe oo ay Somalidu isku disho maadaama ay arrinta Somalidu ku socoto qaab dib-u-heshiin iyo sulux. Dawladaha u diiday hubka iyo ciidanka ee weliba la taliyay in aan arrintaas la isku mashquulin, waxa ka mid ah Jumhuuriyadda Yemen iyo Madaxweyne Cali Cabdallah Saalax. Waxa tusaale ahaan loo siiyay tirada iyo tayada hubka ay haystaan shacbiga Yemen. 90,000,000 oo xubnood oo hub ah � 30ka millyan ee Qof ee reer Yemen waxa lagu qiyaasay in uu qofkii ba haysto ugu yaraan 3 xubnood ( pieces ) oo hub ah. sida lagu sheegay warbixinta UNDP 2001. Dawladda Yemen weligeed ma ay dalban hub-ka-dhigis maamulkeedu na si fiican ayuu u socdaa oo wax waliba waa caadi. Waxa la kasbaday kalsoonida iyo rabitaanka dadwaynaha sidaas darteed na hubku ma uu noqon mushkilad hortaagan dhismaha iyo habsami-u-socodka maamulka dalka.
Yemen oo kulligood wada hubaysan ayay noloshu deggan tahay waxaa na ka jira hor-u-mar xawli ku socda. Haysashada hubku waxa uu isku bedelay Yemen wax uu ninka qabiiliga ahi isku qurxiyo oo qurux loo qaato iyo haybad markii qofka la gaarsiiyay heer nolol fiican oo uu kaga maarmo dhaca iyo boobka. Hubku Yemen waa wax la sharfo oo aan laga qabin cabsi isaga oo yaala guri kasta, caasimadda, suuqa iyo meel kasta. Waxa uu yeeshay sidashada hubku Yemen dhaqan cusub oo casriyaysan iyo qawaaniin xeerka galay oo aan cidina ku xadgudbin waa na lagu kala danbeeyaa haysashada hubka. Wax walba waxa lagu dhameeyay wacyi gelin iyo caqli.
Kabbashada cilmiga gaaban waa lagu kadeedmaa ..
Si loogu sii qanciyo Col.C/Yussuf khasaaraha ballaadhan, kharashka badan iyo waqtiga ku lumahaya aruurinta hubka oo la isku mashquuliyo ayaa waxa loo sharxay oo laga dhaadhiciyay qaabkii loogu guulaystay Yemen in aanu noqon karin hubku mushkilad hor taagan dhismaha dawladda. Waxa loogu deeqay C/Yussuf isaga iyo la taliyihiisa dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha Md. Yussuf Cumar Al-Azhary oo afka carabiga ku fiican laba (2) buug ( kitaab ) oo laga barto sida looga gudbay dhibaatada ka dhalata hubka faraha ka baxay ee galay gacmaha shacbiga. Arrintaas oo lagu soo bandhigay labada buug oo aanu qiimahoodu ka badnayn USD 50 midkiiba. Halka ay ku bixi lahayd malaayiin doolar haddii la qaato mashruuca hub-ka-dhigista oo loo galo hab olole ku wajahan hub-ka-dhigis guud. Kharashka, Waqtiga iyo dadka ku lumahaya ololaha hub-ka-dhista waxa ka door roon oo ay tahay in lagu jiheeyo oo lagu dhaqan celiyo dadka dhaqan xumaystay waqtigii lagu jiray burburka.
Labada buug :
Al-Yemen min Al-Qabiilaha ilaa Al-Dawlah 1911 � 1967 ( Yemen ka Qabiil ku Dawlad ama, Yemen from a tribalhood to a statehood ) qore : Abdulaziz Al-Mas'uudi.
Al-Dawr Al-Siyaasi Lil-Qabiilaha fii Al-Yemen ( Dowrka siyaasadda Qabiilka Yemen ama, The political role for the Yemeni tribes ) qore: Maxamed Muhsin Al-Thahiry.
Haddii uu Col. C/Yussuf daacad ka yahay nabadaynta Somalia iyo mushkiladda hubka waxa kaga filan in uu ku dhaqmo ( haddii loo akhriyay ama uu fahmay kutubta ) waaya-aragnimada laga dhaxlay sida loola tacaalay ama loo maareeyay hubka galay gacmaha dadweynaha dagaal iyo khasaaro la'aan. Tusaale ahaan waxa ku filan in uu ku daydo dawladaha jaarka la ah Somalia sida Yemen iyo Somaliland in uu uga faa'iidaysto waayo aragnimada laga dhaxlay madax-dhaqameedka, qabqablayaasha iyo maamulka jira oo iskaashaday wixii ku saabsan xallinta mushkiladda iyada ah.
Xammaasad dheeraad ah, waayo (why) xabashidu?
Codsigii C/Yussuf ay beesha caalamku ka diiday hub iyo ciidan in la siiyo waxa dhinacooda iyo gaar ahaantooda ku taageeray oo fuliyay Xabashida oo ay jeebkooda tahay talada ay gaargood qaateen ka hor go'aan caalami ah.
Ma dan baa ugu jirta Somalida in mark kale la isugu dhiibo hub cusub oo hor leh?
Waxa laga war hayaa in ay Xabashidu dhinacyo kale oo ka tirsan madaxda beelaha Moqdisho qaarkood ay sidoo kale ku taageertay hub iyo aduun.
Waxa si fiican loo fahamsan yahay in ay xabashida u soo martay fursad qaali ah oo ay weligeed ku taamaysay in ay iska jeediso xoogaggii ka soo hor-jeeday iyo ciidamaddii gobonimo-doonka Somali-Galbeed ee Ogaadeenia. Waxa ay xabashidu ku guulaysatay qaybinta Somalida iyo in ay iska hor keento oo ay ka huriso dhexdeeda dagaal hadba weji kale leh. Kii dhintaa ba waa Somali dhaafay waxay na u tahay xabashida ciid iyo bakhaan-bakh halka ay Somalida na u tahay mid taa ka gedisan oo ah maalmaha qalloocan. Deris-wanaagga dawladuhu waa fiican yahay laakiin faragelinta xabashidu waa mid dheeraad ah oo ka badbadin leh.
Waxa ay Xabashidu ku guulaysatay in ay somalida ka dhex helshay Madaxweyne cammiil ah oo ay ku gaarto danaheeda ay Somali ka leedahay oo ku dhisan cadaawad iyo cirib tir.
C/Yussuf waxa uu ku faraxsan yahay ( only ) in uu ahaado maamule wakiil u ah itoobiya ee matala Somaaliya una fadhiya Moqdisho mustaqbalka dheer haddii uu gaaro ba. Ma kala jecla dadka la maamulahayo in ay yihiin Xabashi ama Somali. C/Yussuf si fiican ayuu u garanhayaa in aan loo baahnayn ciidan shisheeye oo dadka hubka ka dhiga, dab iyo holac mar kale ku dhaca Somalia xasuuq iyo bara-kac, laakiin waxa cad in aanu wadaadku uba jeedin maamul ku dhisan walaalnimo iyo wadaniyad ku salaysan rabitaan iyo in uu noqdo hogaamiye la jecel yahay oo Somaaliyeed. Waxa uu u muuqadaa in uu yahay nin inta waqtiga uga hartay jecel in uu rag naarta ka waraabiyo oo uu cadaabta ku guro � aargoosi qabiil awgiis iyo nin raba inuu kursiga ku sii fariisto cid kastaaba ha dhimato ama ha burburto isaga wax ba kama gelin mar haddii uu noqday Madaxweyne. Madaxweyne mar i dhaha !
Maxaa yeelay waxa uu ku joogi lahaa hadalkiisi hore nin nabad iyo kalsooni wax ku hogaaminaya. Waxa uu aqbali lahaa suluxa iyo walaal nimada ay intaas ku baryahayaan ee ay la hoos joogaan hogaamiyayaasha Beelaha Hawiye oo raba in ay xambaar dhabarkooda ku geeyaan Xamar C/Yusuusf iyo dawladdiisa debed-yaalaka ah dalka iyo dadka dayacmay awgiis oo wax walba looga tanaasulay iyada oo la liqay xumaantii iyo carqaladayntii uu ku hayay xukuumadahii Siyaad Barre, Cali Mahdi, Caydiid iyo Cabdi-Qaasim.
Nin haddii uu seexdo oo uu soo tooso waa isla isagii �.
C/Yussuf tiisii hore ayuu iska wataa waxa uu foodda isu gelanhayo waa intii ka soo hartay ummadda Somaliyeed, in ka ban 300,000 oo hore u dhimatay iyo in ka badan 3 malyuun oo ku bara-kacay dabkii uu asagu bilaabay 36 sano ka hor � sida uu sheegto Cabdullaahi in uu asagu bilaabay oo uu sabab u yahay burburka Somalida iyo khasaaraha ku dhacay oo ay hadana guul u tahay in ay u doorteen Madaxweyne iyaka oo ku khasban. Cidda ku faraxsan dagaalada Somalida keligood oo ay dani ugu jirto waa xabashida iyo wixii la hal-maala. Xabashida oo helshay fursad ay kaga baxdo ciriirigii ka haystay dhinaca dekedaha iyo badaha oo gaartay in ay iyadu maanta wada maamulsho dhammaan dad iyo duunyo shantii Somaliyeed. Waxa cad in ay halkaas na xabashidu kaga raysay Carab iyo Muslim oo marka ay rabto cuna-qabatayn saari karto biyaha durdurka loo yaqaan River Nile.
Maxaan haatan uga heesayaa waa ba la hayaa ye' .
Ma jirto wax natiijo ah ama guul ah oo uu ka gaarahayo C/Yussuf haddii uu sii wado dagaalo iyo xabbad 36 sano oo kale. Laga ma na yaabo in ay run noqoto riyaddiisa iyo tan Xabashida ee ku dhisan wakiil Boqortooyo abasiiniya ee geeska Afrika. Waa baabacada oo ay timo ka soo baxaan in ay xabashidu ka gacan sarayso Somalida colaad ama ay xukunto oo ay gumaysato in kasta oo lala helay Somalida shirqoolo iyo dabinno aanay iska dhaadin sababta oo ah may filahayn Somalidu hadda ka hor in uu jiri karo qof Somali dhalad ah oo asal ah in uu gacan ku siin karo xabashida wax yeelada walaalahii Somaliyeed.
Waxa ay Xabashidu illawsan tahay in uu Col. C/Yussuf la dhashay raggii geesiyada ahaa ee Daarood ee ay ka mid ahaa yeen Mujaahid Sayid Maxamed C/llah Xassan, Mujaahid Axmed-Guray Ibrahim, Mujaahid Maqtal Daahir, Mujaahid Suldaan-Biixi iyo Muj. Maxamed Gaal-Ere ( Maxamded Siyaad Barre wax kale ha joogtee asagu ba ma ogolayn gumaysiga Xabashida ). Waxa kale oo ay illawsan yihiin xabashidu in aanay nabadi ka dhici karin Somali iyo xabashi dhexdooda inta uu ka yahay Madaxweyne Somalia nin Daarood ahi ama inta ay xabashidu gumaysato dalka iyo qoomiyadda ballaaran ee Ogadeen ( Daarood ) iyo Ogaadeeniya.
C/Yussuf iyo noociisu goorta ay noqdeen halyayo ama ay u hunguroodeen in ay Somali hor boodaan ee ay fursadda heleen waa markii ay noqotay dhufaan aan xiniinyo lahayn iyo ma-dhalays aanay cidi dhaxlin himaladii Md. Xaaji Baraako, Md. Dr. Ismaaciil Jumcale, Md. Jenaral Cilmi-Nuur, Md. Jeneral Daa'uud Cabdallah, Md. Janaral-Mujaahid Salaad Gabayre iyo Md. Janaral-Mujahid Maxamed Farax Caydiid.